SingForYou.net - angleaung's Channel
angleaung 's Channel
Contest Winner မာဖီးယား ဖလား ( ၁၀ )
End date: 11/06/2011
Last Login: 11-08-2014 19:17
ohnkyaw on Jun 2, 2014
ta chin lae kyite tel so tet style ko po kyite lo lar lae twar par tel naw..
fadaka200 on Dec 11, 2013
(macymikando@outlook.com)rnMy name is miss Macy Mikando, i become interested in you after going throw your profil, i have something very important to share with you, please i can not speak my mind here properly please try to write me on my private email Id (macymikando@outlook.com) its very vital please don't be offended contact me on my email direct.
AUNG_LATT on Nov 16, 2013
THANKS FOR VISITING MY CHANNEL..I LIKE YOUR SINGING STYLE TOO..KEEP IT UP SIS...
babinalay on Oct 17, 2013
သိချင်းဖိုင်ထဲကို ၀င်လည်ပါတ်သွားတယ်နော ဆိုထားတဲ့သိချင်းတါလည်း အကုန်းလုံး ကြိုက်တယ် ကောင်းဆယ် **********နော
war_tha_nar1 on Jul 27, 2013
Hello!! cutie sis lay, I just visit to your channel.. Thanks for all your supports.
minseinkoko on Mar 11, 2012
simba on Nov 27, 2011
Thanks for your comment sister.
Ilovemusic on Nov 22, 2011
စစ်လေးရဲ့ ချန်နယ်ကို လာရောက် လည်ပတ်သွားပါတယ်...၀ါသနာတူတွေမို့ အစဉ် အားပေးနေပါတယ် ခင်ဗျာ။
turikimuriki on Nov 8, 2011
Thanks4visiting my channel sis lay ... sis lay yae song twe ka laeayan kg tar pal ... sing more :-)))
chitmoe2009 on Nov 7, 2011
channel ko lar lal thwar tar thank yoy naw....sislay yae thi chin tway ko ah myae arr pay nay mal naw........:)
YoteSoeLaye on Nov 7, 2011
မာဖီးယား ဖလား ( ၁၀ ) ကိုဆွတ်ခူးသွားတဲ့အတွက် ချန်နယ်လ်အရောက် ရွှေဖလားလာရောက်ပို.သွားပါတယ်နော်.. အားပေးနေတယ်ရှင်.. ခင်ကြမယ်... အဟိ ...း)
os_oscar on Nov 6, 2011
lol lar lar lae lae twar twar tel tel naw naw :P
akertuntun on Nov 1, 2011
YarKuSar on Oct 13, 2011
လာလည်သွားပါတယ် အိန်န်ဂျယ်လ်လေးးးးးးးးး အားပေးနေတယ်နော်... ချမ်းမြေ့ပါစေ.........
may85 on Oct 10, 2011
နတ်သမီးလေးရေ အလည်လာသွားပါတယ်ရှင့် သီတင်းကျွတ်ကျောင်းပိတ်ရက် အလည်ထွက်တဲ့သဘောလေးနဲ့ ချစ်စရာလေး ပရိုဖိုင်က ချင်းလေးတွေ အားပေးနေပါတယ်နော်
MarPheeYarr on Oct 7, 2011
ချစ်လို. ။ ဟိဟိ ... လာလည်သွားတယ်နော်... အာဘွားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
Y2K on Oct 4, 2011
ညီမလေးရေ အစ်ကို အလည်လာသွားတယ်နော်..ညီမလေးသီချင်းတွေလည်း အားပေးနားဆင်သွားတယ်နော်..သီချင်းတွေအများကြီးသီဆိုအုန်းနော်..အမြဲအားပေးလျှက်း)
mange on Oct 1, 2011
မင်္ဂလာပါ ညီမငယ် အိန်ဂျယ်လေးရေ ... မမငယ် လည်လည်လာသွားပါတယ်ရှင့် ... ချစ်စရာအသံလေးနဲ့ သီချင်းမြူးမြူးချိုချိုလေးတွေကို ဆိုပြတတ်တဲ့ညီမလေးကို အမြဲလည်းအားပေးနေပါတယ်နော့ ... ရှေ့ဆက်လည်း သီချင်းလေးတွေသီဆိုရင်း ဘ၀တလျှောက်လုံး သာယာပျော်ရွင် ချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေလို့ မငယ်ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်နော် ...း))
စစ်လေးရေ အသံလေးက ကလေးလေးလို ဘောက်ဆတ်ဆတ်လေး ဆိုဆိုနေတာ.နားထောင်တိုင်း အရမ်း အသဲယား တယ်သိလား.လာလည်မယ် လာလည်မယ် နဲ့ခုမှ ပဲရောက် တော့တယ်.နောက်လဲ လာလည်မယ်နော် ချန်နယ် ထဲမှာ သီချင်းလေးတွေ ပုံလေးတွေ တင်ဦးနော်.နောက်ထပ်တစ်ခေါက် လာကြည့်ဦးမယ်နော်.း)
View All Recordings of angleaung